Carrie Symonds na mkpọchi na Lake Como?
Location: Mbido » Ịdee » Akụkọ dị iche iche » Carrie Symonds na mkpọchi na Lake Como?
Carrie Symonds na Lake Como - foto © Marc Giddings - MailOnline
Anyị na-eche mgbe niile ihe kpatara na anyị anaghị ahụ foto ọ bụla na obi ụtọ ezinụlọ nke Boris Johnson na Carrie Symonds na nwa nwoke amụrụ ọhụrụ ha Wilfried. Emeela ya baptism na Perugia na njem nzuzo na ngwụcha izu nke Septemba 11 wee bụrụ ọbịa na Castello nke Russian Oligarchs Lebedov, onye nwe Standarding Standard?
Ndị mgbasa ozi Italiantali kwuru na Prime Minista UK Boris Johnson rutere n'ụgbọelu nke onwe na Perugia, mana nke ahụ gọnahịrị n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị. Kama anyị mụtara na mberede Wilfried mere baptizim Katọlik na emume nzuzo na Westminster. Na mberede, ọbụnadị Onye isi ala nke ọdụ ụgbọ elu Perugia anaghị echeta na ọ hụla Boris Johnson ọzọ mana ọ na-eche na ọ ga-abụ na ọ bụbu PM UK Tony Blair.
N'ihi Daily Mirror anyị mụtara Carrie Symonds na-ezumike na ọdọ mmiri kachasị mma n'ụwa, na ọ bụ Lake COMO (CNN) ma soro nwa nwoke Wilfried na-elegharị anya na èbè ebe ọ bụ na mmalite nke izu a.
Mana Carrie Symonds yiri ka ọ họọrọ oge ezighi ezi ezumike dịka Glitzy Lake Como abụghị ọkara dị ka ọmarịcha ka anyị si mara ya, ihu oyi na-ebute ọtụtụ mmiri ozuzo ewerewo, na-emebi atụmatụ ịzụ ahịa na nlegharị anya niile. Site na ihu igwe na-ehichapụ site na Satọdee gaa n'ihu, anya niile na-aga na 5-star Grand Hotel Tremezzo na Lake Como ebe Carrie Symonds bi na ndị enyi 2 na obere Wilfried, Downing Street N ° 10 nke ọdụdụ gọọmentị nke ọdụdụ.
Mana ọbụghị sọsọ ihu igwe tụgharịrị na Carrie Symonds - ọ bụ nkwupụta sitere n’aka Boris Johnson kpasuru ndị Italitali iwe.
Ikwu na ndị Britain anaghị asọpụrụ iwu maka na ha bụ ndị nweere onwe ha, ma jirizie ha tụnyere ndị ,tali, pụtara otu ihe naanị: ndị respecttali na-asọpụrụ iwu maka na ha anaghị akwụ ụgwọ. Nkwupụta ahụ (nke Boris Johnson) dị oke asịrị nke na ọ naghịdị akpasu iwe. Ma gịnị kpatara ya?
Tupu, na Britain, e boro ndị Italitali ebubo na ha adịghị anara ọzụzụ na ndị a na-apụghị ịtụkwasị obi; ugbu a ha nwere ntụkwasị obi ma dọọ ha aka ná ntị? Ndị Briten na-ekwu, gwa anyị ihe anyị kwesịrị ime, ewezuga ịkwanye isi gị na nkwenye (banyere ọnụọgụ Italy nke ọnụ ọgụgụ COVID-19 ma e jiri ya tụnyere UK), ka Corriere della Sera dere taa.
Onye isi ala Republic na-adịkarị jụụ n'okwu dị otú ahụ, mana oge a ọ mere onwe ya ka ọ nụ. Sergio Mattarella chetara na ndị knowtali maara ka esi adị njọ ma ọ B NOTGH need mkpa coronavirus iji chọpụta ya. Onye ọ bụla ya na ụlọ ọrụ Italiantali na-arụkọ ọrụ, onye ọkachamara, onye nyocha, onye na-ese ihe, ma ọ bụ onye nnọchi anya Italiantali maara ya. Ọzọkwa, onye ọ bụla si mba ọzọ nke ga-abata andtali ma soro onye omenkà mara ya, ọ na-eju ya anya. S / ọ ghọtara na ndị cantali nwere ike iche echiche na aka ha ma hụ ọrụ a mere nke ọma. Ọ bụrụ n’echiche na ọ bụ otu ahụ ka ụwa niile dị, ị ga ehie ụzọ.
Obodo United Kingdom amaola ohere iji imitateomie Italia, mba izizi na mpụga Asia nke coronavirus metụtara. UK enyela ndị enyi na ndị enyi ha izu abụọ na atọ n'enweghị ihe ọ bụla - ha niile n'agbanyeghị ụjọ Mịnịsta ala Boris Johnson na COVID-19 kụrụ onwe ya wee gbaga n'ụlọ ọgwụ, kwuru Sergio Mattarella. Ma ọ bụ otu n'ime ndị dọkịta na St. Thomas Hospital na London bụ ndị zọpụtara Boris Johnson bụ onye mere otu a ka ọ bụ onye --tali - Luigi Camporota nke Catanzaro.
O di nwute, Carrie Symonds na obere Wilfried ekwesighi iche iche na nloghachi ha na Britain n'ihi na Italy di nchebe.
Mgbe Britain na-ahụ ọnụọgụ nke COVID-19 na ọnụ ọgụgụ na-arị elu ruo 6,604, istali na-akọ akụkọ 1,900 taa.
Ihe ikikere a, gụnyere foto © Elisabeth Lang (belụsọ na edeghị ya), enweghị ike iji ya na-enweghị ikike edere site n'aka onye edemede yana site na eTN. Isi foto © Marc Giddings - MailOnline.
Airport Asia Boris Johnson Corriere della Sera Covid-19 Hospital Hotel Italy London United Kingdom
Czech Airlines maliteghachi ụgbọ elu na Moscow, Russia
Rio de Janeiro Carnival yigharịrị ruo oge ebighi ebi gbasara ọrịa COVID-19
Ebe ezumike adịchaghị ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu International Ontario...
Kedu ihe ọhụrụ na Bahamas n'April